Into the Badlands (2016) TV Series မြန်မာစာတန်းထိုး (စ/ဆုံး) - Channel Myanmar Update
Channel Myanmar Update
မြန်မာစာတန်းထိုး ဇာတ်ကားများ စုဝေးရာ
Love O2O Chinese Drama Series
Ugly Duckling Don't Mini Series
Pinocchio Korea TV Series
Synopsis of My Amazing Boyfriend Series
Uncontrollably Fond (2016) Korea Drama Series
Yong Pal (2015) Series
Two Weeks Series
Nightwings Mini Series
Legend Of The Blue Sea Series
Good Doctor Series
CAMELOT Mini Series
Into the Badlands (2016) TV Series မြန်မာစာတန်းထိုး (စ/ဆုံး)
ခုတလော Series တော်တော် များများက Drama .. ဒါမှမဟုတ်ရင် Mystery .. ဒါမှမဟုတ်ရင် Thriller တွေက များလာပါတယ် .. အဲ့ဒါတွေကို ခဏ နားပြီး Action Series ကောင်းကောင်းလေး ပြောင်းကြည့်ချင်သူတွေအတွက် အလန်းစား Fighting Scene တွေ .. Action အကြမ်းစားတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးရသကို ပေးနိုင်မယ့် Series လေးတစ်ခုကို Gold Channel ပရိသတ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ..
ကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေအပြီးမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေဟာ ပြိုလဲပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ရပါပြီ ..။
လူသားမျိုးနွယ်စုဟာလည်း ဆက်လက်အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက် ကြပ်တည်းစွာ ရုန်းကန်နေကြရပါပြီ ..။
အဲ့ဒီလိုအစိတ်စိတ်အမြွှာမြွာဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တစ်နေရာမှာ Badlands ဆိုတဲ့ နယ်မြေရှိပါတယ် ..။
အဲ့ဒီနေရာကို Baron လို့ခေါ်တဲ့ အရှင်သခင် ခုနှစ်ယောက်က အသီးသီး အုပ်စိုးနေကြပါတယ် …။
အဲ့ဒီ Baron ခုနှစ်ယောက် ထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Quinn ရဲ့ သက်တော်စောင့် ညာလက်ရုံး .. အဆင့်မြင့် တိုက်ခိုက်ရေးသမား Sunny …
နားလည်ရခက်တဲ့ စွမ်းအားတွေနဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ မိသားစုကို လိုက်ရှာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ .. M.K ဆိုတဲ့ ကောင်လေး ..
သူတို့ နှစ်ဦးပေါင်းပြီး ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီး နိုင်သူစားစတမ်း Badlands ကြီးထဲမှာ ဘ၀ အဓိပ္ပါယ်အစစ်ကို ရှာဖို့ကြိုးစား ကြပုံကို ရင်သပ်ရှူမောဖွယ် ကြည့်ရှူ ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..။
ယခုစီးရီးကို ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာကတော့ တမူထူးခြားတဲ့စီးရီးတွေကိုမှ ရွေးချယ်ထုတ်လွှင့်တတ်တဲ့ AMC ကပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..။ Martial Arts အသားပေးစီးရီး ဆိုတော့ မင်းသားက ကောင်းကောင်းမှ သရုပ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ လည်း စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး ..။ New Police Story တို့ Naked Weapon တို့မှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအက်ရှင်တွေ သရုပ်ဆောင်ချက် တွေနဲ့ ပရိတ်သက်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး Daniel Wu ပါ ..။
(AMC Studios ကို သဘောကျတဲ့အချက်ကလည်း စီးရီးတွေမှာ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်မယ့် မင်းသားတွေကို ရွေးချယ်ဖို့ နောက်မတွန့်တတ်တာပါပဲ .. ဘက်ဂျက်ကို ချွေတာနိုင်သလောက်ချွေတာပြီး ခပ်ပေါပေါရိုက်တတ်တဲ့ စီးရီးတွေ များလာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ Main Steam ထဲ က မင်းသားတွေကို ဘက်ဂျက်မကြည့်ဘဲ ထည့်ရိုက်ရဲတဲ့ Studio အနည်းစုထဲက တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ် .. ထွက်သမျှ စီးရီးတွေဟာလည်း HBO က ထုတ်တာတွေ လောက် မခမ်းနားပေမယ့် အရည်အသွေးပိုင်းမှာတော့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ Studio တစ်ခုပါ ..) ..
နောက်ပြီး အခု Into the Badlands ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ တစ်ခေတ်တခါက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Journey to the West -အနောက်ဘက်သို့ ခရီးသွား (စွန်းဝူခုန်း) ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကို အနည်းငယ်မှီငြမ်းထားပါတယ် ..။
Into the Badlands ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Hunger Game .. Divergent Series .. Maze Runner တို့လို Post Apocalypse ဇာတ်လမ်းမျိုးကို Martial Art Genre နဲ့ အလန်းဇယား ကြည့်ရှူခံစားရနိုင်တာမို့ လက်တို့ညွှန်းဆို လိုက်ရပါတယ်..။
Credit To : www.goldchannelmovies.com
Translate by: SKL
Review by: MgKaung
Encode by: Hein Min Htet
PCLOUD Direct Link
Episode - 1 Episode - 1
Episode -2Episode - 2
Episode -3Episode - 3
Episode -4Episode - 4
Episode -5Episode - 5
Episode - 6(END) Episode - 6(END)
Labels: Action, Adventure, Drama, Into the Badlands (2016) TV Series
13 January 2018 at 08:49
အပိုင်း2လေး ဒေါင်းမရတော့လို့ ပြန်တင်ပေးလို့ ရမလားဗျာ
13 April 2018 at 18:46
NightWings (2015) MIni Series
Yong Pal (2015 series
Cheeky (2000) 21+ - မြန်မာစာတန်းထိုး
Cheeky ဆိုတဲ့ ဇတ်လမ်းလေးဟာ Comedy & Drama ဆိုပေမယ့် သာမန် 18+ ရုပ်ရှင်ကားတွေထက် အများကြီးဆိုးပါတယ် သတိပြုသင့်တာက မိသားစု...
White Girl (2016) 18+မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဆေးစွဲနေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆေးခြောက်ရောင်းတဲ့ ကောင်လေးတို့နှစ်ယောက်အကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေး...
Crash (1996) - မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီဇာတ်ကားကို အရွယ်မရောက်သေးသူများမကြည့်သင့်ပါ။ Nudity အခန်းတချို့ပါပါတယ်။ ဇာတ်ကားကလဲ Psycho ဆန်ပြီး Sexual Pleasure နဲ့ Car Crash ကိ...
ဒီကားလေး ကို ပြန်ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ့် movie review ကို တော့ english လိုသာ ဖတ်လိုက်ကြပါဗျာ့ Overview Hong Kong (?) Will begin flight...
Legend Of The Blue Sea ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
မနေ့ကမှထွက်တဲ့ Drama အသစ်စက်စက်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ဒီဇာတ်ကားဟာ မထွက်ခင် သုံးလလောက်အလိုကတည်းက...
The Con Artists မြန်မာစာတန်းထိုး
ခုနှစ်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေထဲ အောင်မြင်မှုတော်တော်များများရခဲ့ပြီး မြောက်အမေရိက၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူ၊ဗီယက်နမ်တို့မှာပါ ပြ...
CAMELOT Mini Series (စ/ဆုံး)
မီးနတ်တန်ခိုးရှင် မော်ဂါနာနှင့် ဘုရင်လေးအာသာ (သို့မဟုတ်) CAMELOT Mini Series (စ/ဆုံး) (မြန်မာစာတန်းထိုး 720P HD) 18+ Action, Adventur...
Harassed byastalker (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး ================================================= လူတွေကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်..ကမ္ဘာပ်ါမှြာေ...
Morgan (2016) မြန်​မာစာတန်းထိုး
(IMDB - 5.8/10) အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်​ဗျာ ဒီတခါ​တော့ ကျွန်​​တော်​တို့ရဲ့ ပရိတ်သတ် ​တွေ နှစ်​သက်​​လောက်​မယ့်​ Morgan ဆိုတဲ့ ဇာတ်​ကား...
Spectral (2016) IMDb : 6.4 Rotten Tomatoes : 80% How you can stop if you can’t see the enemies are coming? “ရန်သူတွေ လာနေတာ မမြင်ရရ...